Shirkii u dhaxeeyey Booliska Federaalka iyo kuwa goboleedyada oo Bay-dhabo ka socdo (Sawirro). | Somali National Television - sntv.so
Home KOONFUR GALBEED Shirkii u dhaxeeyey Booliska Federaalka iyo kuwa goboleedyada oo Bay-dhabo ka...
Shirkii u dhaxeeyey Booliska Federaalka iyo kuwa goboleedyada oo Bay-dhabo ka socdo (Sawirro).
Waxaa maalintii Labaad galay Shirkii ka socday Magaaladda Baydhabo ee u dhaxeeyey Booliska Federaalka, kuwa dowlad goboleedyadda iyo Wasaaradda Amniga Qaranka iyo Wasaaraddaha dhigeeda ah ee Maamulada dalka ka jira, waxaana shirkaasi diiradda lagu saarayaa arrimaha ammaanka dalka.
Ku simaha Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, S/guuto Mukhtaar Xuseen Afrax oo kulankaasi shir guddoominaya ayaa kulanka kadib booqasho ku tagay dhowr Xarumood oo Booliska Magaaladda Baydhabo ay ku sugnaayeen, waxaana kormeerka ku wehliyey Wasiirka Amniga, Taliyaha Qeybta Booliska Koofur galbeed iyo Saraakiil kale.
S/guuto Mukhtaar Xuseen Afrax, Ku simaha Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa Abaal marino Lacageed guddoonsiiyey qaar kamid ah Ciidanka ku sugnaa Xarumaha uu booqashada ku tagay, taasi oo ah mid lagu dhiiri gelinayo Ciidanka, si ay u laba jibaaraan Shaqada culus ee Qaranka ay u hayaan.
Previous articleMaamulka Degmada Heliwaa oo faah faahin ka bixiyay dab ka kacay Suuqa Xoolaha (Sawirro).
Next articleEng,Yarisow oo sheegay in maamulkiisa uu ka shaqeynayo sidii shacabka loo siin lahaa awoodda dowladnimada (Sawirro).